Bittrex ogolaan doonaa maalgashadayaasha si ay u iibsadaan cryptocurrency la doolarka Maraykanka
Investors haatan waxay leeyihiin fursad cusub oo ay u soo iibsadaan cryptocurrencies doolarka Maraykanka.
Bittrex, sarrifka ah cryptocurrency ku salaysan Seattle, ayaa heshiis u ogolaanaya maalgashadayaasha si ay u iibsadaan lacagta birta ah digital in doolarka Maraykanka gaadhay. In la soo dhaafay, qadaadiicda kaliya on baayacmushtari Coinbase, lacagta a digital ee California, waxaa laga iibsan karaa in dollars. Taasi waa qayb yar oo ka mid ah qiyaastii ah 1500 qadaadiicda digital sabayn ee caalamka cryptocurrenices.
Si aad u iibsato ah lacagta qadaadiicda kale, maal hore wuxuu lahaa si loogu badalo in ay lacag Seeraar. Hadda waxay leeyihiin Bittrex.
Aasaasay shirkadda Bill Shihara u sheegay CNBC in goolka uu ahaa “si loo ballaariyo suuqyada badan intii suurto gal on Bittrex,” ayuu yiri on Friday “Money Fast.”
“Iyo sidoo kale waasicinnay, macaamiisha kasta on Bittrex awoodaan si ay u helaan ganacsi Doolarka Maraykanka uu noqon doono,” ayuu yidhi.
Suuqa ayaa xitaa ka caawin kara in ay u guuraan suuqa. Tan iyo qadaadiicda badan oo kaliya waxa laga iibsan karaa Seeraar, qiimaha Seeraar iyo lacagaha kale oo badan digital si dhow xiran. Qiimaha ka mid ah unugyada crypto haatan uu bilaabo inuu decouple ka Seeraar, Shihara yiri, sida maal dheeraad ah oo ku ganacsan in dollars.
Currently, ku dhowaad 200 qadaadiicda digital kala duwan la baayacmushtari karaa Bittrex. Agaasimuhu wuxuu sheegay in a “yar, Tirada doorashada ee la-hawlgalayaasha xawaaladaha” shaqeeya suuq in ay bixiyaan lacagta doolarka ah.
“Marka marxaladdan waxaan ka tijaabinta nidaamka,” ayuu yidhi. “Waxaan si dhow ula shaqeeyaan bangiyada si loo hubiyo in ay ka arrinsashada kartaa kayd Fiat iyo qaadashada, iyo engine aan ganacsan la awoodo in ay la tacaalaan xamuul si fiican u noqon doontaa.”
Cryptocurrency weli badanaa aan sharciyeysneyn ee dalka Mareykanka, keenaya hay'adaha badan oo dhaqaale iyo maal-in ay taxadar ku saabsan lacagta birta ah ee muuqaalka ah musuqmaasuq baahsan iyo been-abuurka ICOs. ganacsatada kale ee la baadhay suuqyada shisheeye in ay maal-hantida digital sida Seeraar.
Report Kraken Daily Market for 03.06.2018
$139M baayacmushtari jireen dhamaan suuqyada maanta
Crypto, EUR, USD, JPY, CAD, iibiyey
Apple co-aasaasaha Steve Wozniak rajeynaya Seeraar noqdo lacagta caalamiga ah ee hal
CEO Twitter Jack Dorsey dhawaan wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay Seeraar ayaa noqon doona lacagta caalamiga ah ee hal, wax Apple co-aasaasaha Steve Wozniak rajeynaya dhici doona.
“Waxaan soo iibsato waxa Jack Dorsey ayaa sheegay in, taasuna ma ahaan inaan daruuri rumeeyey waxa ku dhici doona, laakiin maxaa yeelay, waxaan doonayaa inuu noqdo jidkaas, waa fikirka si saafi ah… Seeraar waxaa xisaab ahaan lagu qeexay, waxaa jira tiro ka mid ah Seeraar, waxaa jira hab waxa uu qaybiyey ... waana daahir ah oo ma jirto orodka aadanaha, waxaa jira shirkad ma ordaya oo waxa kaliya ... kordhaya oo sii kordhaya ... iyo badbaaday, ii sheegay in wax waa dabiiciga ah iyo dabeecada ka muhiimsan yahay dhamaan heshiisyada aadanaha.”
Belarus si rasmi ah legalizes dhan ganacsiga la xiriira crypto iyo ganacsiga
Maanta Belarus offici ...
Post Previous:Salada Ethereum ImToken leeyahay $ 35B ee kayd, in ka badan 99% ee bangiyada Maraykanka
Post Next:Blockchain News 05.06.2018